"I-Rialto" Indlu encinci
NGOKUPHELELEYO AKUKHO IZINJA OKANYE IZILWANYANA-ZILWAYO NGENXA YE-LOFT KWAYE AKUKHO ABANTWANA. Yiza wonwabele ubuhle bePacific Northwest! I-Rialto Beach, i-LA Push Beach, kunye neelwandle ezimbini zokuhamba uhambo (2nd & 3rd) yimizuzu nje ukusuka kwiKhaya lethu eliNcinci.
Igumbi lokuhlambela eligcweleyo/ishawari. Ikhitshi eligcweleyo, ifriji, isitovu phezulu, i-convection/microwave. Le yunithi ikwanayo ibhafu yabucala eshushu ngakwiveranda!
AKUKHO ABANTWANA ngenxa yebhedi ephezulu kunye nokufikelela. Ubuninzi bokuhlala kwintsapho ngabantu abadala aba-2. KWAKHONA, NCEDA AKUKHO IZINJA OKANYE IZILWANYANA-ZILWAYO NGENXA YE-LOFT KWAYE AKUKHO ABANTWANA.
Indawo yethu ikwindawo ekuchithelwa kuyo iiholide enendawo yokutyela kunye nevenkile eluncedo, i-24 hr ingqekembe esetyenziswa kwindawo yokuhlamba impahla. Sinenkonzo yesikhokelo somlambo, isikhululo sokucoca iintlanzi kunye neendawo zokuhlamba iimpahla. Sihamba ngokufutshane ukuya kwiPaki yeSizwe yeOlimpiki, iilwandle zolwandle, imilambo, amahlathi ashinyeneyo, iindawo ezithandwayo zolwandle kunye nemingxuma emikhulu yokuloba. Ngokwenene yenye yezona ndawo zimangalisayo, ezingqongwe bubuhle bendalo!
AKUNKUNISWA NGEZILWANYANA NGEZILWANYANA NGENXA YELOFT.
4.88 · Izimvo eziyi-808
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi808
Kukho ezinye iikhabhini, iisayithi zeRV kunye neendawo zeentente kwipropathi ngokunjalo. Le Ndlu iNcinane ineTUBHU eshushu!
Izimvo eziyi-4 222
Nceda usazise ngokukhawuleza ukuba ufuna nantoni na okanye unenkxalabo malunga nokuba yintoni na. Sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kupholile kwaye kukhumbuleke, kwaye yaziwa ngokuba nobubele kakhulu kwaye kulungiselelwe kakhulu! Gcina ukhumbula ukuba iVerizon yinqaba yethu yeseli (umthuthi) kwaye ibonelela nge-LTE kwindawo ngesantya esincinci ngamaxesha athile onyaka. Abanye abathwali beefowuni kunye neenkonzo zedatha banokuthi bangabikho ngaphandle kweForks, ngoko aba babhalisi bayacetyiswa ukuba bakhuphele izikhokelo zethu zokuqhuba ngaphambi kokushiya iiForks, banenkqubo ye-satellite ye-GPS, okanye imephu yephepha.
Nceda usazise ngokukhawuleza ukuba ufuna nantoni na okanye unenkxalabo malunga nokuba yintoni na. Sifuna ukwenza ukuhlala kwakho kupholile kwaye kukhumbuleke, kwaye yaziwa ngokuba…